काठमाण्डौंमा पनि फेसबूक लाइभ’मा आएर एक युवतीले गरिन आत्मह’त्या (भिडियोसहित)
July 5, 2020 1072
दागंमा एक युवतीले फेसवुक लाइभमै देहत्या’ग गरेको घ’टना सेलाउन नपाउँदै फेरी काठमाडौंमा त्यस्तै प्रकृतिको घ’टना भएको छ । काठमाडौं कारकेश्वर वासुकी नागटोल ९ मा फेरी त्यस्तै घट’ना भएको छ ।
उदयपुर घर भएकी सर्मिला मगरले फेसवुक लाइभ गर्दै देहत्या’ग गरेको घट’ना सार्वजनिक भएको छ । उनी राति करिब २ वजे फेसवुक लाइभ गर्दै देहत्या’ग गरेको हुन सक्ने छिमेकीले बताएका छन् ।
राती ९ वजेसम्म पनि सामान्य अवस्थामा देखिएकी उनी राती कोठामा एक्लै थिइन् । छिमेकी महिलाले भनिन्, हिँजो मैले दिनभर उनलाई मोवाइ’लमा विजी भएको देखेको थिए ।
कोठा भाडामा बस्नेहरु बताए अनुसार राती करिब १२ वजेतिर उनी पानी परेपछि कपडा उठाउन छ’तमा समेत पुगेकी थिइन् । तर विहान अवेर समेत उनको कोठा नखुलेपछि एउटै घरमा भाडा’मा बस्नेहरुले हेर्दा उनी मृ’त फेला परेकी थिइन् ।
छिमेकी र संगै कोठामा बस्नेह’रुसंग उनले यस अघि मलाई त बाँ’च्न मन छैन भन्दै आएकी थिइन् । संगै बस्ने एक महिला भन्छिन्, अस्ति मात्र यो लुगा सिलाएकी थिइन् । असार १५ गते दहि चिउ’रा खाने दिनमा त्यो लुगा पनि लगाएकी थिइन् । अहिले यहि लुगा लगा’एकै अवस्थामा मृ’त देखिएकी छन् ।
ति युवतीले स्टुल माथि चढेर सिलिगंमा स-लको पा सो लगाएर झु ण्डि एको अवस्थामा युवती’लाई स्थानियले देखेका थिए । एक जना स्थानिय तरकारी किन्न पसलमा आएका थिए ।
उनले चला’एको पसलमा तरकारी किन्न आएका यु’वाले सटर ढकढक्याएर बोलाउँदा युवती नआएपछि ति युवकले झ्या’लको पर्दा खोलेर हेर्दा युवतीलाई मृ’त देखेका थिए ।
त्यसपछि उनले अन्य स्थानि’यलाई खबर गरेका थिए । त्यस पछि प्रहरी आएर श’व पोष्टमा’र्टमका लागि लिएर गएको थियो । ति युवतीले केही दिन यता अस्वभाविक ब्यवहार देखा’उने गरेकी थिइन् ।
दिनभरी पनि झ्यालको नजिक आएर रु’दै बस्ने गरेकी थिइन् । छिमेकीले उनले रुँ’दै मोवाइलमा भिडि’यो बनाउँदै गरेको पनि देखेका थिए । एक जना पुरुषले भने यि युवती’लाई यहाँ आएर रुँ’दै बस्दै गरेको देखेको थिए ।
उनले झ्या’ल देखाउँदै भने, झु’लुक्क आउने जाने गर्थिन । अर्का ब्यक्तिले पनि उनी केही दिन यता आफुले संचालन गरेको पसलमा पनि बस्थिनन् । आफुहरु तर’कारी किन्न आउँदा पनि कोठामा बो’लाउन जानुपर्ने बताएका छन् । भि’डियो तल हेर्नुहोस….(ताजा खबर)
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस….
Nextआज एक तोला सुन चाँदीको मूल्य कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्…